Nin ku eedaysan Kufsigii iyo dilkii Xamdi Maxamed oo lagu Qabtay Cadaado | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Nin ku eedaysan Kufsigii iyo dilkii Xamdi Maxamed oo lagu Qabtay Cadaado
Sep 16, 2020 - 47 Aragtiyood
Muqdisho ( Kalshaale ) Taliye ku xigeenka ciidamada Booliiska Soomaaliyeed, Sakiya Xuseen Axmed ayaa sheegtay in gacanta lagu dhigay eedeysane lagu tuhmayo inuu lug lahaa kufsigii iyo dilkii loo geystay Xamdi Maxamed Faarax.
Gen. Zakiyo ayaa shaacisay in eedeysanaha oo baxsad ah xalay goor saq-dhexe ah lagu qabtay magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud, Waxayna magaciisa ku sheegtay Maxamed Ibrahim Cismaan oo 24 sano jir ah, kuna dhashay magaalada Muqdisho.
“Ciidanka Boliiska Galmudug ayaa xalay xili dambe howlgal ay ka fuliyeen magaalada Cadaado ku soo qabtay eedeeysane Maxamed Ibrahim Cismaan, 24 jir ah, ku dhashay Muqdisho laguna tuhmaayo inuu ku lug lahaa kiiska marxuumad Xamdi Maxamed Faarax kana baxsaday Xamar falka ka dib.” ayey tidhi Zakiyo Xuseen Axmed.
Sidoo kale waxa ay u mahadcelisay ciidamada Booliiska Galmudug ee howlgalka samaayey iyo shacabkii la shaqeeyey ee suura-geliyey in la soo qabto eedeysanaha.
“Waxaa u mahad celineenaa shacabka Galmudug oo ciidanka boliiska ku gacan siiyay soo qabashada eedeeysane Maxamed Ibrahim Cismaan oo baxsad ahaa.” ayey markale tiri General Sakiya.
Waa eedeysanihii 12-aad ee loo xidho dilkii iyo kufsigii loo geystay marxuumad Xamdi oo Jimcihii lagu dhaafay laga soo tuuray dabaq ku yaalla degmada Waabari ee Gobolka Banaadir.
Hoose Ku Qor Fikradada ( 47)
In ninkaan Xabad lagu dhufto maaha XAQ, horeyna waan u sheegay waqtigii dhibkii CAASHO SOOMAALI loo geystey.
Waa in la mariyo arin aan horey uga dhicin Soomaaliya
Waa in lagu xiro TIIR laga Taagey meesha ugu kulul Soomaali,
Kadibna uu si tartiib tartiib ah oo silac iyo saxariir ah uu u dhinto
Waa inuu Tuke madaxa ka cuno
Waa iney Qoraxdu dubato
Waa in Quraanjo iyo Haddu daaqdo.
– Taas waaye wuxuu Drug kasto oo dhibaateeyo gabdhaha xasuusan
– Taas waaye Caddaaladda XURMOOYINKA SOOMAALIYEED.
* Allow Naarta Hoy uga dhig kuwa Dumarka xoogo
asc ninfas iixii kadabeeyay wat in aashito lagu shubaa lana cabsiiyaa
Dhankayga aan Gar iyo Gardarrada kala jeclayn, Wuxuu raacsanyahay Dabshid, Dhanka kalana Wuxuu leeyahay Maxkamad Islaamiya Gòaan haka gaarto. WBT
12 waa in la daldalo, hadduu Maamulka Banaadir state arintaas fulin waayo
Waa iney fuliyaan ehelada Xamdi oo ay ugaarsadaan XAARAANTII FALKAAN KA DAMBEYSAY.
HAAWEYDA HAWIYE maxeey la qaylinayaan…Ma gabadh la kufsaday oo la’dilay…
HAAWEYDA HAWIYE, meeqa gabdho SOOMAALIYA ay dileen oo kufsadeen..
HAAWEYDA HAWIYE, meeqa gabdho SOOMAALIYEED xoog ku ka xaysteen..
HAAWEYDA HAWIYE, maxeey uga qaylinayaan wixii ay sameen jireen in lagu sameeyo..
HAAWEYDA HAWIYE, meeqa shacab SOOMAALIYEED ay dileen… Oday, caruur, haweenay, culumo…
Aniga, BARAWAANI, waxaan markhaanti ka noqonayaa in hortayda lagu dilay.. 38 nin oo aan hubeeysneen, oo shacab ah..
Dadkaas, bari-magaydada.. maxaa lagu laayey.. QABIILKA DAAROOD lee tiheen aa lagu laayey..
Aniga, BARAWAANI, walaahi (6) jidh aan ahaa.. dhagax lee ku dagaalamayaan…
3 habeen iyo 3 maalmood aan ooyaanaaye… dhiigii iga soo faniinay, waa diiday in la iga dhaqo…
Nimankaase, waxeey dhamaantooda ahaayeen WARSANGALI..
Walaahi, magacayadooda waa soo dhigi karaa BARTAAN..
Taas, waxaa ka darran, anno xoog leh, oo guri wacan ku soo koray, guri dabo-jeex ah, wata aan soo maray 150…. ee Beletwayni…
Markii, ay maqleen, in ciidamo ku soo wajahan yiheen ay buuraha fuuleen..
HAAWEYDA HAWIYE, liiteen, markii ay rag is-galaan..
AKHRISTOOOW, WALIGBA ABSAME, OGAADEEN… Yaan la hilmaamin…
C/ Raxmaan says:
Barwaani King asc . Waxaan kuweydiiyey : Hawiye waa imisa qof ? Maxaa qalad ah maxaase sax ah , agtaada . Gabadha / marxuumadda Xamdi ma waxaa kuwaajibay iney bixiso wax ku dhacay waa hore gabadh Daarood ah ? Maxaa sax ah , maxaase qalad ah . Gabadhii hore er la dulmiyey iyo tanba sow walaalahaa ma aha ( in Islam ) ? —– ” Ninkii waxuu yiri ” Naa waad sooqayishaye yaad lasooqayishay ” – Basaaska – Cadowga shisheeye ee bartay afkeenna – Iyo doqonka Seddaxdaas way iskaga kaa ekaankaraan , lkn kuuma ekaankaraan !
Hal gabadh baad ka hadlaysaa… Hal maalin oo qudha oo saacado tahay… baa hortayda lagu dilay 38 qof oo berrimageeydo ah.. Waxaa lagu dilay DAAROOD Lee waayeeeee…
Anigo waxaan ka hadlayaa wax aan indhahayga ku arkay, oo iga hadhi waayey.
Maxaa sabab ah oo ragaas lagu dilay??
Dabshid aka Uganda lover wrote with rare ignoramus bluff
“Waa in la mariyo arin aan horey uga dhicin Soomaaliya
Waa in Quraanjo iyo Haddu daaqdo.”
Hala dilo haddii ay ku caddaado weeye sida saxda waayo waa muxaarabo sida shareecada qabto ee maahan tii halbeeggu ahaa qisaasta boqolleyda iyo kontonlayda.
Laakiin dabshid hadalkaadu wuxuu ku abtirsaday nimanka sheekhaal ee yidhi xitaa laba jirka ha loo xasuuqo aana qabiil darteen.
Kutubo xoor sheekhaaleed fatwadiisa lama beecin karo……kkkkkk GAW
@: Barawani King dadkaasi iyo kuwo kaleba dilkoodu waxuu ahaa dulmi . Adigu maxaad ku diidantahay inaad qirtid inuu dilka marxuumaddan yahay dulmi ? Ogoobeey maanta ma tihid 6 jir ! Teeda kale sxb maxaad sameyndoontaa hadey AAKHIRO faraqa kugudhegaan milaayiin qof oo HAWIYE ah ood kusoo aflaadeysay intaad joogtay adduunka guudkiisa . Taajir.com .
” Ho nacnacaan oo qofwalba G…l ka taabo “
Xaasha ma diidani in gabadhaase dulmi ku dhimatay…
Hase yeeshee, dulmigaas waxaa u keenay .. AABAHEED, ABTIGEED, oo hadda ku haya WAA WAREEEY, WAA WAREEY…
HAAWYDA HAWIYEE, dhibka haasta waa RABBAANI….
HAAWYDA HAWIYEE, dhibka haaysta waa dulmigii ay ka galeen SOOMAALI WEYN..
MAXEEY TIDHI AAYADA QURAANKA: (وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ )
Waxa maantay ku dhacayaa HAAWEYDA HAWIYEE, waa wax horey u geeysteen..
Anigo, BARAWAANI, ka nixi maayo, HAAWEYDA HAWIYE, waxa haaysta..
Gabadha Xamdi Maxamed Farah ma beelaha yaryar aheyd, meeye raggeedii sidee gabar la kufsaday biyanada looga tuuraa…yaab
Waan ogahay Xamar kufsigu dambi kama aha iyo Somalia meelo badan.
Haddaan la helin caddaalad lagu cinqaabo doofaarta guska la ordaya oo sexual violence wadda oo wiilasha xitaa xoogaya oo bahaloobay waa in shacabka kaco.
Mob killings iyo in dhagax lagu dilo shacabku bilaabaan.
Ninkaan haddii la qabtay waa in tusaale noqdaa sida kuwii Caaisho ku dilay Galkacyo oo tiirka la suraa.
No mercy for the rapists.
War meesha yaa ka jooga KUMAADEEE..ABSAMI.. OGAADEEN..
Waryaa haya warkii BAN-BILAAYO oo lagu xasuuqay caruur, dumar, odayaal..
Dagaalkaase, waxaa lagu xasuuqay ilaa 15,000 oo berrimagaydo ah….
taariikhdase, waxeey ku qoran tahay xasuus qorkayga..
hadii la rabo waa soo dhigaaa….
ALL PUNTLAND.. Abti waa ku salaamay…
CAASHO ILYAAS, ILAAAHNA WAA LAHAYD, RAGNA WAA LAHAYD…
XAMDI, BAASABOOOY lee dhalay…. MARUURSADE ay ka dhalatay oo futada kaga yaal HAAWEYDA HAWIYE…
AFAR QOOBLEEEEEE…. AMA KUWAIT MUQDISHU.. Waligood aa la iska fagan jidhay…
Haddaba shacabka Cadaado ayaa sheegay Dambiilahaan Baxsadka ahaa,
Waan qabaa in marka hore BEEJADA LAGA JARO kuwa Xoogo XURMOOYINKA SOOMAALIYEED.
Waa in nin gabar xoogay bulshada dhexdeeda ku nabad gelin.
Waa in la fahmo: Gabadha la dilay inta la xoogey inay noqon kartay walaashaa.
Puntland waa laga nastay gabdho xoogid waayo geeri baa dabataal.
Koofur weli caadi ka tahay, waa in nina ku fekirin gabar xoog berina suuga ku arkayso.
Wayooyi ma dhaanto oo gabdhihii xalay diiday in la kufsado ayaa rapist suuqa maalin cad jeedal la dhacay oo baraha bulshada lasoo dhigay..
Calaashaan shaqadaan xalay kuu diray ma aadan qaban oo ma qancin ninkaan kuu diray.
Somali waa in arinkaan dagaal ka xigaan..run
Ummad aan maatadooda difaacan karin maaha ummad jirta..run
Reer Cadaado arinkaan waxay ku tusaysaa in yihiin dad fiican oo qarsan doofaarkaas….
Waa lagu xasuusan reer Cadaado in qabteen ninkii dambigaas weyn u gaystay gabdhaas oo walaal, waalid iyo ehelkeedii caawa caro la jiifaan oo cadaalad sugayaan.
Kusos reer Cadaado✌️
War tuuga HAG yuu ka yahay waa usagan cadado
Marxumad XAMDI waa inay hesha xaqeda muqdisho
Ma noqonayso… meel hablaha somaliyed lagu dhibo
Waan ogahey inaad adiga iyo @ Wiil Qardho
Arintaan ay geysteen Dambiileyaal
Abaabul looga horyimaado Farmaajo
Ninkaan waad ogtahey qabiilkiisa
Lkn waxaad rabtaa in lagu cel celiyo
Wiil Mareexan, si aad DHIIG UGA KEENTO MEESHA CUN CUNEYSO REER MUQDISHO
* Saqiir Majeerten sir la’aan ma dhinto
Somali San says:
Adeer magaca noo dhig ninkaani maahan reerkaad ku sheegayseee.
Ku dadaal in Doorashada dambe codkiinu dhaafo 30 cod
Haddii kale maanta dhan ku soo cel celi
Reer Muqdishow yaa HORTA XOOGEY XAMDI
Nin mareexan oo denbiile ah ayaa u baxsaday
Caadaado xataa saqiirka hada dhashay kama gadi
Kartid arintaas ee ninka HAG yuu ka yahay??
Meeqa sano ayaad transit ku aheyd Xamar adigoo u socdo Garowe
Ninku wuxuu u socdey Cabudwaaq
Kollay dhibkii Somalia ka dhacag goobjoog ayaad u ahayd oo godob waad aragtay.
Aniga ma joogin oo 1984 ka guureen reerkayga weliba Kacaankii ka qaxnay.
Laakiin mid baan ku xasuusin, Hawiye badankooda waa victims, dhibanayaal.
In Hawiye miis wada saarto waa qalad haddii kale Dabshid lee noqon oo Daarood miis wada saaray.
Dulmigii waa lawada lahaa kulli Somali, cid ka nadiif ma jirto. my opinion.
Ilaa Jabhadihii socday ilaa maanta…Dantu waa intee uga gudubnaa maanta meesha naal.
Wixii dhacay waa dhaceen ee sidee loogu noqon aniga ii muhiim ah.🖐
Markii iigu horeysay meel rag Daarood ah laga tarxiili oo Axmaaro gacanta loo gelin waxey aheyd GAROWE, markii Faroole la weydiiyeyna uu dhahey ” Boowe Afsoomaaligey Barteen ee maahan Soomaali”
Waagas lama aas aasin URURKA KABLALAX ee MARAQ KISMAAYO
Gaaladu waxey dhahdaa
LABO SHEY WALIGAA KAAMA HARTO
– Weedh aad walaalkaa tiri
– iyo Bullet aad walaal kaa dhu dhufarey.
Yacni Calaamaddii Xabadu ku sameysay ka harineyso, hadalkii aad dhahdeyna kaa harimaayo
Feysal Waraabe- aayaa nagu xantey
NIN XANAAQSAN xitaa Furiinka looma qabto
Dee Anna yaan la ii qaban – Wiilkii Addiss Ababa iyo Wiilkii Xamar.
Feysal taasi waa calaamad kugu taal oo kaa harimeysee ka hadal agenda fadhiga
– OGAADEEN SOOMAALI MAAHAN EE AFSOOMAALIGEY BARTEEN ( Xamar lagama dhihin, nin Hawiye ma dhihin).
Waa run oo Daarood iskuguma hiiliyo gardaro.
Raggii ONLF labaxay oo maato xasuuqay oo maalin cad ku dilay askar amniga sugaya Jigjiga in Garoowe ku qayilaan maaha islaanimo ama ibnu aadanimo.
2 nin ahayeen oo loo dhiibay Ina Cabdi Ilay.
Weliba warqad dabadhigtay Puntland in cafis loo waydiiyo dadkii dileen magna beelaha kala qaataan.
Waxay ahaayeen reer jilib hoose isla ah dhibanayaasha iyo dambiilayaasha.
Cadaalad maxay tahay??? daanyeer Dabshid ma garan karaa.🦥
Wax anaga la yiraado ma jirto..adiga gunta laangaabka ah ayaa ”anaga” raadiya..yaa anaga kula ah. ma jin baad u sheekaysaa?
Ma Isaaq iyo Hawiye ayaan Dabshid kala doodaa?
Jawaabtii lagu siin lahaa waa kaa xirantay..
Cid aa tahay ma aqaan hadaad cid noosheegto jawaab ku siin lahaa, mid uun baan ogahay in Laangaab gun ah tahay oo cid isku badayiyo raadinaya.
Anoo Cumar Maxamud jooga oo Darood xitaa weligey sheegan miyaan Irir ka doodi karnaa oo wax jira ahayn.
Aniga Somali ama jilib hoose ka doodi karaa.
Xitaa Maxamud Saleeban ka xishoodaa in magacooda ku doodo inta Majeerteen, Harti, Kablalax iyo Darood la gaarin.
Miskiin oohintii ka dhammaatay…kkkkkkkk
Waan ku raaxaystaa warka qorto, waa calaamad nin qabiil lahaan jirin ku haftay…kkkkkk
Ka feker anoo ka xishooday in magaca Maxamud Saleebaan halkaan uga doodo magacooda oo xitaa in Cumar Maxamud magacoogu ku doodo xad gudub u arka miyaan Dabshid kula dooda Isaaq iyo Hawiye oo isku duuban oo Irir u bixiyey…Yaab..kkkkkkk
Laangaab waa ehulu naar.
Qof la dilay,mid wax dilay,mid la kufsaday,mid wax kufsaday,mid wax boobay iyo kan la boobay,mid la aasayo,mid wax aasaya,mid la xaday,mid wax xadaya,mid la dhacay,midka wax dhacaya,mid daaalin ah,iyo kan la dulmiyayo.Sheekada somaliyeed waxay salka ku haysaa qabiil.
,Mid siyaasad u socda,mid raba inuu xisbi furto,mid raba inuu shaqo helo,mid raba inuu xildhibaan noqdo.Mid raba inuu dantiisa gaadho mid raba inuu wax dilo,mid raba inuu wax qaribo iyo mid raba inuu si dhaqso ah lacag u sameeyo,arinkasta oo somaliyeed wuxuu waxay salka ku haysaa qabiil.
Wax kasta oo ka dhacaya somaliyeed,wuxuu salka ku hayaa qabiil.Sida looga falceliyo arinkaasi ama xer ciqaabeedkii wuxuu ku soo dhamaanayaa qabiil.Sida looga hadlo iyo warka suuqa yaalaa wuxuu salka ku hayaa qabiil.
Wax Bulsho ku noolaato,oo diin ama dhaqan ah oo aan sheeko
qabiil ahayn,kama jiro somaliya.
Hablaha somaliyeed qaran difaacaya ayay rabaa – ma rabaan calaacal iyo sheeko reer hebel,ma rabaan sheeko Reer hebel iyo in mag laga sheekeeyo.
Hablaha somaliyeed waxay rabaan qaran.
Kaasi ayaa difaacikara hablaha somaliyeed.Kaasi ayaa si siman u difaacikara u difaacikara maatida iyo dadka jilic san.
hablaha somaliyeeed may haystaan rag amaankooda damnaad qaada.
Ninyahow caawa murti ayaad qortay laakiin wixii looga bixi lahaa ayaa ku dhaaftay.
Maaha in qabiil colaadiso.
Maaha in qabiil ku cayso gaalo raac.
Maaha in qabiil la degen tahay necbaato.
Maaha in wadani iyo dabadhilif adigu kala taqaan.
Maaha in dhib ka dhex jirin Somali adiga abuurto.
Maaha in dadka kaa fikir duwan wadani ahayn.
Maaha talada dalka oo wada leenahay inta i diida waa qaainu wadan.
Maaha mustaqalka dalka waan wada leenahay ee aan ka tashanao in qaran dumis tahay.
Maaha agoontii kacaanka in keligood saxan yihiin..
Waxa aan ka hadlaya waa nolol dhan oo ku dhisan Reer Hbel,sheeko ku dhisan Reer Hebel.
Bulshadani,dhaqan iyo Diin midna ma haysato.Sida ay ku noolaayaan ama ku sii jirinkaan ayay su;aali ka taagan tahay.
Adiga ayaa dadka ku caaya qabiil iyo in dadka somaliyeed yihiin agoontii kacaanka.Adigana in lagugu caayo Amxaarkii aad biyaha u siday waa sax.
Midda amxaarka ee aad la bahtahay waa run been maaha.
Ma runta ha sheegin ayaad leedahay?
Shalay waxaa aad looga doodayey sharciga Galmada oo qolada Golaha Sacabka la hor keenay.
Waxaa sharcigaa keenay Wasiiradda Haweenka.
Waxaa ku taageersanaa xubno ay ka mid tahay Maryan Haaruun,Jeesow oo isagu horay warkiisa loo hayey balse markan ka gaabsaday illeen fulay xantii ma moogee.
Hadadaba arintan yaa daaha gadaashiisa ka riixaya?
Hubaal waxaa arintan Soomaalida ku dirqinaya wadama gaalaa oo ay Norway ugu horrayso,balse kuwa badan oo USA ay kamid yihiin ay la dhacsanyihiin.
Arintan waxaa kale oo fursad qaali ah oo uu isaga gadi karo beesha caalamka u arka Farmaajo.
Waxay ka mid tahay Card-ka ugu dabeeya oo uu cayaarayo doonayana inuu beesha caalamka uga farxiyo kuna beer dulucsado.
Laakiin Farmaajo si badheedh ah arintaa uma wajihi karayo oo qolada Golaha Sacabka wuu ogyahay dad badan oo damiirkodu noolyahay inay jiraan aanay ka hor iman karaan xitaa haddii uu lacag siiyo si ay arintan u ansixiyaan.
Waxaa laga yaabaa sharcigaa doodiisa inuu qaab kale ku wajaho oo uu si dhuumaalaysi ah kaligii u saxiixo ayadoo la adeegsanayo Mursal iyo kooxdiisa.
Fadhi kudirir wax ku xalin mayno.
Waa sida u sheegtay in isku cayno agoontii Kacaanka iyo agoontii Gabre waa qalad…kkkkkkk
Aniga waan kuu sheegay..in iscayo meel ku gaari mayno.
Ku noqon waxa aan qoray waad hafmin waxa rabo.
Boorama iyo Galkacyo oo isku tashada oo daarta ninka rabaan oo u matala dowladda dhece ee Somalia.
Ninka diidan Deni oo Puntland keensadeen waa nin raba in xoog ninkale iigu keeno mana yeelayo, taas dagaal ka xigaa.
Maxaad rabtaa? tuura Deni oo kan Farmaajo idiin keeno qaada…..no,no no, my friend.☹️
Soo layaab maahan nin aan Hal school iyo hal hospital dhisin inuu maanta Xamar keeno Sharcigii Los Angeles
Wixii lagu xamanhayey miyaa wax ka jiraan
Nabad galyadii, shaqadii iyo musuq maasuqii ayuu xal u waayey markaas ayuu KUULEY CALI BSNJAR DHAHEY II SOO QOR WAXAAN KU MASLAXERYO LOS ANGELES MAYOR
Yaa kugu yiri waa Mrexaan ninka gabadha kufsaday?…
Hadday run tahay muxuu Cadaado ka doonay?..
Waar ha la kala xishoodo…
Annagu dhaqan ahaan arrinkaa xeerar adag baan ka leennahay… Laba beelood baa isugu go`da gabar tin laga jaray, iska daa Kufsiye…
Waxa dhacay waa Kufsi wadareed, ciyaal suuq saaxiibbo ah ayaan gaystay, walina ma cadda sida ay wax u dhaceen, sabab Mrexaan loola saloosho oon ka ahayn in ujeeddo laga leeyahay ma taallo…
Habari hadday jabto Mrexaan baa ka danbeeyay miyaa iyo niicdii mucaaradka?…
Puntlandta aad sheegayso,iyo maamulka aad sheegayso ayaa qabiil salka ku haya.Wax kale oo uu salka ku hayaa ma jirto.
Anigu ninku inuu xukun raadiyo ama is dhaho xoogaa meesha inta aad joogto ka luflufo lama yaabo,laakiin waxaa ugu daran marka caqiidada,diinta iyo dhaqanka lagaa soo galo.
Ogow sharcigan gaaladu waxay inoogu dirqinayaan waxaa jira dad ay diyaarsadeen oo ay doonayaan inay ina dul keenaan maalin maalmaha ka mid ah.
Laakiin waa maangaab ninka aan indheergaradka ahayn ee indhowgaradka ah kana fakaraya wax yar oo aan macno lahayn.
Miskiin… Ma halkaas bay kaa maraysaa?… Nafla caari.com…
Xeerkan waxaa soo agaasimay golaha wasiirrada intii uu Khayre Xilka hayay… Wali lama ansixin, lagamana doodin oo waaba la laalay… Wasiiradda ayaa ku dhegtay oo damacday inay ku dirqiso Baarlammaanka, sidaa buuna ku soo shaac baxay…
-Kaar walba soo xoqate, waxna idiin tari waa, hadda waxaad maraysaan inaad kaarkii Galmada iyo kufsiga xoqotaan, ood gaalada ku beerlaxawsataan, markuu idinka qarxayna sidii caadada idiin ahayd ku xawila Farmaajo… kkkkk
Sida aynu ka warqabno Golaha Sacabka wax aan Farmaajo raali ka ahayn lamaba keeno lagamana doodo.Waa sababta aan ugu tilmaamayo Golaha Sacabka.
Khayre oo Norway dabada kasoo riixayso ayaan waagii hore sharcigan ku tuhmayey,laakiin markii isagii baxay wixiina wali la wadwado. Waxaa ii caddaatay in ar Farmaajo arinta wax ka wado.
Maanta sida aanu la socono xukuumad dhisan wadankan kama jidho.Baarlamaanka horaanu u ogeyn oo waa Golaha Sacabka,wax walbana Farmaajo ayaa isku ah.Marka yaad ka dhaadhicin karaysaa Farmaajo oo diidan arinkan baa Golaha Sacabka in la keeno wasiir ku dhiiradey?
Adigaaba warkii dhammeeyay… kkk
Hadduu farmaajo wax ka wado xeerkan oo uu baarlammaanku jeebaddiisa ku jiro, isla markaana uu gaalada ku beerlaxawsanayo maxaa loo laalay, soo in la meel mariyo ma ayan ahayn?…
Hadalkaagii baa is duqeeyay judhiiba… kkkkk
Waar Ilma adeerrayaaloow bahashan waa horaa lagu kala badiyaye wax iskula hadha, oo yaan la isku fogaan…
Hadalkayga ayaan kuugu daray in aan Farmaajo toos usoo abbaarikarayn arinta. Galaha Sacabka wuxuu ku haystaa waa lacag iyo laaluus,laakiin arinkan xitaa lacag isagoo dhiibey ma uu hubo inuu gudbayo,waayo dadka qaar baa damiiroodu noolyahay.Ee arintu waa ishaafalatayn iyo in beesha caalamka la iska gado lana maqashiiyo anigu waxaan raabaa inan idinkala shaqeeyo arintaa mihiimka ah baarlamaanka ayaa laakiin diidan.
Arinkan waxa loo wad wadaa in dhaga Soomaalida la maqashiiyo marar badan,si aan looga didin arintuna u noqon mid kacdoon shacab keenta.
Marka sanada badan waanu maqlaynaa arinkan oo lagu soo cebeliyo ilaa aakhirka aynu aragno dadka laga hadlayo qaar ka mida oo baarlamaanka dhex taagan oo arinkan u doodaya.
Mareexaan kulahaa sida wax loo kufsado maba naqaan kuwaan waa dil ciday donaan ha ahaadaan
Dabshid waa nuur amiin play maker madbacada mbc kkkkk karaama dhageey ayaa yaabay